Zealanddị Ngwa Visa New Zealand | Ndebanye aha NZeTA
New Zealand eTA Visa Ngwa .dị
1. Nyefee Ngwa n'ịntanetị
2. Nyochaa ma gosi Paymentkwụ .gwọ
3. Nweta Visa enyịme
Biko tinye ozi na Bekee
Nye nkọwa nke paspọtụ ị ga-eji banye New Zealand. Tinye nkọwa ndị a kpọmkwem dị ka ọ dị na paspọtụ gị.
Obodo Paspọtụ *
Họrọ Mba nke Paspọtụ Afghanistan Albania Algeria Andorra Angola Antigua na Barbuda Argentina Armenia Australia Austria Azerbaijan Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belarus Belgium Belize Benin Bhutan Bolivia Bosnia na Herzegovina Botswana Brazil Brunei Darussalam Bulgaria Burkina Faso Burundi Cabo Verde Cambodia Cameroon Canada Central African Republic Chad Chile China Colombia Comoros Congo Congo, Democratic Democratic nke Costa Rica Côte d'Ivoire Croatia Cuba Cyprus Czech Denmark Djibouti Dominica Dominican Republic Ecuador Egypt El Salvador Equatorial Guinea Eritrea Estonia Ethiopia Ethiopia Fiji Finland France Gabon Gambia Georgia Germany Ghana Greece Grenada Guatemala Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Honduras Hong Kong Hungary Iceland India Indonesia Iran, islam Republic of Iraq Ireland Israel Italy Jamaica Japan Jọdan Kazakhstan Kenya Kiribati Korea North Korea South Kosovo Kuwait Kyrgyzstan Lao Ndị mmadụ Democratic Republic Latvia Lebanon Lesotho Liberia Libya Liechtenstein Lithuania Luxembourg Madagascar Malawi Malaysia Maldives Mali Malta Marshall Islands Mauritania Mauritius Mexico Micronesia, Federated States of Moldova, Republic of Monaco Mongolia Montenegro Morocco Mozambique Myanmar Namibia Nauru Nepal Netherlands New Zealand Nicaragua Niger Nigeria North Macedonia Norway Oman Pakistan Palau Palestine Panama Papua New Guinea Paraguay Peru Philippines Poland Portugal Qatar Romania Russian Federation Rwanda Saint Kitts na Nevis Saint Lucia Saint Vincent na Grenadines Samoa San Marino São Tomé na Príncipe Saudi Arabia Senegal Serbia Seychelles Sierra Leone Singapore Slovakia Slovenia Solomon Islands Somalia South Africa South Sudan Spain Sri Lanka Sudan Suriname Sweden Switzerland Siria Arab Republic Taiwan Tajikistan Tanzania, United Republic of Thailand Timor-Leste Togo Tonga Trinidad na Tobago Tunisia toro toro Tuvalu Uganda Ukraine United Arab Emirates United Kingdom United States Uruguay Uzbekistan Vanuatu Vatican City
Nọmba paspọt *
Datebọchị Mpempe akwụkwọ ikike *
Irybọchị Mwepu Passport *
Chọghị NZeTA ma ọ bụrụ na ị na-ejegharị na paspọtụ New Zealand ma ọ bụ Australia.
Onwe na njem nkọwa
Ezinụlọ / aha ikpeazụ *
Tinye aha ikpeazụ gị dịka egosiri na paspọtụ gị
Aha izizi / nke enyere ha *
Tinye Aha Mbụ na nke etiti dịka egosiri na paspọtụ gị
Ụbọchị ọmụmụ *
Obodo amụrụ *
Họrọ Mba nke Mmuo Afghanistan Åland Islands Albania Algeria American Samoa Andorra Angola Anguilla Antarctica Antigua na Barbuda Argentina Armenia Aruba Australia Austria Azerbaijan Bahamas Bahrain Bangladesh Barbados Belarus Belgium Belize Benin Bermuda Bhutan Bolivia Bonaire, Saint Eustatius na Saba Bosnia na Herzegovina Botswana Brazil Obodo Britain nke Antartic British Indian Ocean Territory Brunei Darussalam Bulgaria Burkina Faso Burundi Cabo Verde Cambodia Cameroon Canada Cayman Islands Central African Republic Chad Chile China Colombia Comoros Congo Congo, Democratic Democratic nke Cook Islands Costa Rica Côte d'Ivoire Croatia Cuba Curaçao Cyprus Czech Republic Denmark Djibouti Dominica Dominican Republic Ecuador Egypt El Salvador Equatorial Guinea Eritrea Estonia Ethiopia Falkland Islands (Malvinas) Faroe Islands Fiji Finland France French Guiana French Polynesia Gabon Gambia Georgia Germany Ghana Gibraltar Greece Greenland Grenada Guadeloupe Guam Guatemala Guernsey Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Honduras Hong Kong Hungary Iceland India Indonesia Iran, islam Republic of Iraq Ireland Isle nke Mmadụ Israel Italy Jamaica Japan Jersey Jọdan Kazakhstan Kenya Kiribati Korea North Korea South Kuwait Kyrgyzstan Lao Ndị mmadụ Democratic Republic Latvia Lebanon Lesotho Liberia Libya Liechtenstein Lithuania Luxembourg Macau Macedonia Madagascar Malawi Malaysia Maldives Mali Malta Marshall Islands Martinique Mauritania Mauritius Mayotte Mexico Micronesia Moldova, Republic of Monaco Mongolia Montenegro Montserrat Morocco Mozambique Myanmar Namibia Nauru Nepal Netherlands New Caledonia New Zealand Nicaragua Niger Nigeria Niue Norfolk Island North Macedonia Northern Mariana Islands Norway Oman Pakistan Palau Palestine Panama Papua New Guinea Paraguay Peru Philippines Pitcairn Islands Poland Portugal Puerto Rico Qatar Reunion Romania Russian Federation Rwanda Saint Barthelemy Saint Helena Saint Kitts na Nevis Saint Lucia Saint Martin Saint Pierre and Miquelon Saint Vincent na Grenadines Samoa San Marino São Tomé na Príncipe Saudi Arabia Senegal Serbia Seychelles Sierra Leone Singapore Sint Maarten (Dutch akụkụ) Slovakia Slovenia Solomon Islands Somalia South Africa South Georgia na South Sanwichi Islands South Sudan Spain Sri Lanka Sudan Suriname Svalbard na Jan Mayen Swaziland Sweden Switzerland Siria Arab Republic Taiwan Tajikistan Tanzania, United Republic of Thailand Timor-Leste Togo Tokelau Tonga Trinidad na Tobago Tunisia toro toro Turkmenistan Turks and Caicos Islands Tuvalu Uganda Ukraine United Arab Emirates United Kingdom United States Uruguay Uzbekistan Vanuatu Vatican City Venezuela Vietnam Virgin Islands, British Virgin Islands, US Wallis and Futuna Yemen Zambia Zimbabwe
Ebe amụrụ onye *
Tinye obodo ma ọ bụ Ọnọdụ ọmụmụ gị dị ka egosiri na paspọtụ gị
Nọmba Njirimara Mba
Họrọ Gender Nwoke Female Transgender
Bọchị A Ga-atụ Anya Arbịa *
Ga-enweta ozi email nke na-akwado nnata nke Ngwa gị na adreesị ozi-e ị nyere.
You gbanwewo aha gị na mbụ?*
Aha (s) gara aga *
Aha mbu / aha ikpeazụ *
Have nwere ebe obibi na-adịgide adịgide Australia?*
Ọ dịghị mkpa na ndị bi na Australia ga-akwụ ụgwọ IVL. Mgbe ị gara New Zealand, ị ga-enwerịrị akwụkwọ visa na-adịgide adịgide nke Australian nke na-enye gị ohere ịlaghachi ofesi si Australia.
Na-ejegharị na ụgbọ mmiri na-aga New Zealand?*
Enwere ike iji NZeTA a ma ọ bụrụ na ị na-eme njem na New Zealand.
You ga-anọ na New Zealand?*
Ee Mba, abum onye njem na-agafe agafe.
NZeTA gị ga-adị ire maka ịga naanị n'ọdụ ụgbọ elu Auckland International. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịhapụ ọdụ ụgbọ elu ma banye New Zealand, ị ga-egosi nke a na arịrịọ NZeTA gị ma kwụọ ụgwọ IVL.
Are rughi eru inweta NZeTA. Tinye maka Visa Visitor.
Ọ bụrụ na ị bụghị onye bi na Australia na-adịgide adịgide mgbe ahụ enwere ike iji NZeTA a ma ọ bụrụ na ị bụ onye njem na-agafe agafe na ọdụ ụgbọ elu Auckland International ma ọ bụ na ị na-eme njem na New Zealand na njem. Ndị njem na-agafe agafe enweghị ike ịbanye na New Zealand.
Na-esite na Auckland International Airport na-agafe ma ọ bụ si Australia?*
Ọ bụrụ na ị bụghị onye bi na Australia, mgbe ahụ enwere ike iji NZeTA a ma ọ bụrụ na ị bụ onye njem na-agafe agafe na ọdụ ụgbọ elu Auckland International ma ọ bụ site na Australia ma ọ bụ na ị na-aga New Zealand na njem. Ndị njem na-agafe agafe enweghị ike ịbanye na New Zealand.
Are na-eleta New Zealand maka ọgwụgwọ ma ọ bụ ndụmọdụ?*
Enweela mgbe ebula gị, wepu gị ma ọ bụ wepu gị na mbata nke mba ọzọ (ọ bụghị New Zealand)?*
Amachibidoro gị ugbu a ịba New Zealand n'ihi mbupụ si New Zealand gaa na mbụ?*
Ever nwetụla mgbe nwudoro, gbaa akwụkwọ ma ọ bụ maa ikpe ikpe na mba ọ bụla?*
Ever nwetụla mgbe a mara gị ikpe maka iwu a tụrụ gị mkpọrọ afọ 5 ma ọ bụ karịa?*
N’ime afọ iri gara aga a mara gị ikpe ikpe dara gị nga maka ọnwa iri na abụọ ma ọ bụ karịa?*
Nye foto gị
Nye foto ihu ọma gị. N'aka nke ọzọ, ị nwere ike ịwụnye bulite foto ugbu a wee nata ntuziaka ka esi eziga ya ma emechaa site na email.
You nwere ike bulite foto ugbu a*
Nwere ike bulite foto na-adịbeghị anya ma ọ bụ jiri igwefoto ngwaọrụ gị iji see foto.
Foto gị ga:
- gosiputa ihu oma, uzo doro anya na ihu nke onye choro
- gosi gi na anya gi mepere emepe ma kwuputa okwu
- enweghị ihe ọ bụla na-ekpuchi anya gị ma ọ bụ ihu gị, dị ka ugogbe anya maka anwụ ma ọ bụ ntutu
- gosi naanị gị
- ghara inwu oke ọkụ ma ọ bụ gbaa ọchịchịrị ma nwee ndabere, ọkụ na-acha ọkụ ọkụ
- Onweghị onyinyo na ihu ma ọ bụ na ndabere
- Ọ bụrụ na ị na-eyi isi / ịchafụ ihu, biko hụ na oke ntutu dị na isi yana oke agba na-egosi n'ụzọ doro anya
× Naanị ụdị faịlụ ndị a ka enyere: jpeg, jpg, png, pdf
× Ịga nke Ọma! Edere foto ahụ nke ọma.
Gha enweta ozi-e na otu esi esi eziga anyi na foto gi.
Nkwupụta nke anamachọ
M na-ekwuwapụta na ozi m nyegoro na ngwa a bụ eziokwu, zuru oke ma zie ezi.
Agụọla m ma ghọta ya usoro na ọnọdụ na amụma nzuzo.
Site na ime nchọgharị, ịnweta na iji weebụ a, ị ghọtara ma kwenye na Usoro na ọnọdụ atọrọ n'ime ya, nke a kpọrọ "usoro anyị", yana "Usoro na Ọnọdụ". ndị na-enyocha eTA, na-edebanye arịrịọ ha NZeTA site na webụsaịtị a, a ga-akpọ ya "onye na-arịọ arịrịọ", "onye ọrụ", "gị". Okwu "anyị", "anyị", "anyị", "weebụsaịtị a" na-ezo aka ozugbo.
Ọ dị mkpa ịmara na a na-echebe ọdịmma iwu onye ọ bụla yana na mmekọrịta anyị na gị sitere na ntụkwasị obi. Biko mara na ị ga-anabata usoro ọrụ ndị a iji jiri saịtị anyị yana ọrụ anyị na-enye.
A debara ozi ndị a dị ka data nkeonwe dị na nchekwa data nke weebụsaịtị a: aha; ụbọchị na ebe ọmụmụ; nkọwapụta paspọtụ; data nke mbupute na ngafe; ụdị ihe akaebe na-akwado / akwụkwọ; ekwentị na adreesị ozi-e; adreesị nzipu ozi na adreesị ebighi ebi; kuki; nkọwa teknụzụ teknụzụ, ego ịkwụ ụgwọ wdg.
A na-edebanye aha ozi edepụtara ma chekwaa ya n'ime nchekwa data nke weebụsaịtị a. Ekekọrịtala ihe ndebanye aha na webụsaịtị a ma ọ bụ gosi ndị ọzọ, belụsọ:
Mgbe onye ọrụ ahụ kwenyesiri ike ikwe omume.
Mgbe achọrọ ya maka njikwa na ndozi weebụsaịtị a.
Mgbe enyere iwu iwu inye iwu, ịchọrọ ozi.
Mgbe amara gị ọkwa na enweghị ike ịke oke.
Iwu chọrọ ka anyị nye nkọwa ndị a.
Nkwupụta dịka ụdị nke enweghị ike ịkpa oke nkeonwe ozi.
Companylọ ọrụ ahụ ga-ahazi ngwa ahụ site na iji ozi nke onye na-achọ ya nyere.
Weebụsaịtị a anaghị aza ajụjụ maka ozi agbasaghị ọ bụla.
Maka ozi ndị ọzọ gbasara iwu nzuzo anyị, hụ Iwu Nzuzo anyị.
Ojiji nke weebụ a, gụnyere ọrụ niile enyere, na-ejedebe naanị maka ojiji nkeonwe. Site na ịgagharị na iji weebụ a, onye ọrụ kwenyere na ọ gaghị agbanwe, detuo, jigharịa ma ọ bụ budata nke ọ bụla n'ime ihe nrụọrụ weebụ a maka iji azụmahịa. All data na content na weebụsaịtị a nwere ikikere. Nke a bụ ebe nrụọrụ weebụ nwere nkeonwe, ihe onwunwe nke ụlọ ọrụ nkeonwe, na-esonyeghị na gọọmentị New Zealand.
Anaghị anabata ndị ọrụ webụsaịtị a:
Nyefee mkparịta ụka mkparị na webụsaịtị a, ndị otu ndị ọzọ ma ọ bụ ndị ọzọ.
Bipụta, kesaa ma ọ bụ detuo ihe ọ bụla nke iwe nye ọha na eze na ụkpụrụ omume.
Na-ekere òkè na ọrụ nke nwere ike ibute imebi ikike ikike echekwara nke web a ma ọ bụ nke ọgụgụ isi ..
Ihe omume ndị ọzọ na-ezighi ezi.
Kwesịrị ka onye ọrụ weebụ wee hapụ iwu dị n'okpuru ebe a; kpatara mmebi na ndị ọzọ mgbe ị na-eji ọrụ anyị, a ga-ejide ya / ọ ga-eji kpuchie ụgwọ niile ọ kpatara. Anyị enweghị ike ma ọ bụ tinye aka na ihe ọ bụla mebiri emebi nke ndị ọrụ weebụ a.
Ọ bụrụ na onye ọrụ emebie iwu nke Usoro yana Ọnọdụ anyị, anyị nwere ikike ịga n'ihu na usoro iwu megide onye mejọrọ ya.
Nkagbu ma ọ bụ enweghị mmasị na ngwa NZeTA
Ọ bụrụ na onye ọrụ ahụ etinye aka na ọrụ ọ bụla amachibidoro, nke ekwuputara ebe a, anyị ga-edobe ikike ịkagbu ngwa visa na-echere; ịhapụ itinye aha onye ọrụ; iwepu akaụntụ nke onye ọrụ na data onwe onye na web.
A machibidoro onye ahụ itinye akwụkwọ ikike:
Tinye ozi nke ugha
Zochie, hapụ, leghaara ozi ngwa NZeTA achọrọ n'oge ndebanye aha
Eleghara anya, gbanwee ma ọ bụ hapụ ihe ọ bụla nke ozi achọrọ n'oge usoro ngwa NZeTA
Ọ bụrụ na isi ihe ndị a edepụtara n’elu tinye n'ọrụ na onye NZeTA akwadoro, anyị nwere ikike ihichapụ ma ọ bụ kagbuo ozi onye na-arịọ arịrịọ.
Banyere Ọrụ anyị
Ọrụ anyị dị ka onye na-eweta ntanetị na ntanetị iji kwado usoro e-Visa ka ndị mba ọzọ wee gaa New Zealand. Ndị ọrụ anyị na-enyere aka inweta akwụkwọ ikike njem gị site na gọọmentị New Zealand nke anyị na-enye gị. Ọrụ anyị gụnyere, ịtụle azịza gị niile nke ọma, ịtụgharị asụsụ ozi, inye aka na dejupụta akwụkwọ anamachọihe ahụ yana ịlele akwụkwọ ahụ dum maka izi ezi, izu ezu, nsụpe na nyocha asụsụ. Na mgbakwunye anyị nwere ike ịkpọtụrụ gị site na email ma ọ bụ ekwentị maka ozi ndị ọzọ iji hazie arịrịọ ahụ. I nwere ike ịgụtakwu banyere ọrụ anyị na "ihe gbasara anyị" nke weebụsaịtị a.
Mgbe ị gwụchara akwụkwọ anamachọihe ahụ enyere na webụsaịtị anyị, arịrịọ gị maka akwụkwọ ikike ikike njem ga-edenye akwụkwọ mgbe ọkachamara nyochachara. Ngwa e-Visa gị ga-akwado nkwado site na gọọmentị New Zealand. N'ọtụtụ oge, a ga-ahazi ngwa gị ma nye ya ihe na-erughị awa 24. Agbanyeghị, ọ bụrụ na abanyela nkọwa ọ bụla na ezighi ezi ma ọ bụ ezughi oke, ngwa gị nwere ike igbu oge.
Tupu ịmalite ịkwụ ụgwọ maka ikike njem, ị ga - enwe ohere ịtụle nkọwa niile enyerela na enyo gị ma mee mgbanwe ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Ọ bụrụ na i mehiere, ọ dị mkpa na ị na-agbazi ya tupu ịga n’ihu. Ozugbo i kwenyechara nkọwa ndị ahụ, ị ​​ga-akpali ịbanye nkọwa nkọwa kaadị kredit gị maka ụgwọ ọrụ anyị.
Anyị guzobere Asia na Oceania.
Anyị na-ebido n'ihu maka ụgwọ ngwa NZeTA anyị. Enweghị mgbakwunye ma ọ bụ zoro ezo.
Agencylọ ọrụ anyị na-akwụ $ 74 ụgwọ n'elu ụgwọ gọọmentị New Zealand.
Rịba ama na ịnyefe ngwa NZeTA gị site na weebụ a pụtara na ị gaghị akwụ ụgwọ ego azụmahịa 2.5%, nke gọọmentị gọọmentị New Zealand boro gị. Mgbe gọọmentị New Zealand na-enye anyị nkwụghachi, a ga-emere ndị ahụ na-enyocha akwụkwọ ndị a jụrụ akwụkwọ NewTA eTA ha.
Enweghị nkwụghachi ga-eme na ngwa ọ bụla ntinye akwụkwọ nke ngwa ahụ. Ọ bụrụ na etinyebeghị akwụkwọ anamachọihe gị na weebụsaịtị gọọmentị New Zealand, enwere ike ịrịọ nkwụghachi maka elebara anya.
Nwa Oge Nke Ọrụ
Enwere ike kwụsịtụrụ weebụsaịtị a ruo nwa oge maka ndozi ọrụ ma ọ bụ ihe ọzọ, na-enye ọkwa maka ndị na-achọ akwụkwọ na okwu ndị a:
Agaghị enwe ike ịga n'ihu n'ọrụ weebụ n'ihi ihe kpatara njikwa anyị dịka ọdachi, ngagharị iwe, mmelite ngwanrọ,
Weebụ kwụsị ịrụ ọrụ n'ihi ọdịda eletrik eletaghị ma ọ bụ ọkụ
Achọrọ usoro mmezi
Ekwesiri nkwụsị ọrụ maka mgbanwe na sistemụ nchịkwa, nsogbu ọrụaka, mmelite ma ọ bụ ihe ndị ọzọ
Ndị ọrụ nke weebụsaịtị a agaghị aza ajụjụ maka mmebi ọ bụla enwere ike ịme n'ihi nkwụsị ọrụ ọrụ nwa oge.
Ntọhapụ pụọ na Ibu Ọrụ
Ọrụ nke weebụsaịtị a na-ejedebe na nkwenye nke ụdị mpempe akwụkwọ visa na ntinye nke ngwa NZeTA dị n'ịntanetị. N'ihi nke a, websaịtị a ma ọ bụ ndị ọrụ ya enweghị ike ịta ụta maka nsonaazụ ngwa ikpeazụ n'ihi na ndị a nọ na gọọmentị New Zealand. Agaghị aza ajụjụ maka ụlọ ọrụ a maka mkpebi ikpe metụtara visa ọ bụla dịka ịjụ visa. Ọ bụrụ na a kagburu ma ọ bụ gọnarị akwụkwọ visa nke onye na-arịọ arịrịọ n'ihi na-eduhie ma ọ bụ na-ezighi ezi ozi, weebụsaịtị a enweghị ike ịza ajụjụ.
Site na iji weebụ a ị kwenyere isoro na nrube isi na ụkpụrụ yana mmachi ojiji weebụ, atọrọ ebe a.
Anyị debere ikike ịmegharị na ịgbanwe ọdịnaya nke Usoro yana ọnọdụ yana ọdịnaya weebụ a n'oge ọ bụla. Mgbanwe ọ bụla emere eme ga-adị irè ozugbo. Site na iji weebụ a, ị ghọtara ma kwenye nke ọma ịgbaso ụkpụrụ na mgbochi nke weebụsaịtị a setịpụrụ, ị kwenyesiri ike na ọ bụ ọrụ gị ịchọpụta maka mgbanwe ma ọ bụ mgbanwe ọdịnaya ọ bụla.
Ọ bụghị mbata na ọpụpụ Immigrashọn
Anyị na-enyere gị aka ịme ihe n'aha gị ma anaghị enye ndụmọdụ ọpụpụ maka mba ọ bụla.
Anyị nwere nghọta gbasara ozi nkeonwe anyị na-anakọta, otu esi achịkọta, jiri ya ma kesara anyị 'Ozi nkeonwe' anyị pụtara ozi ọ bụla enwere ike iji mee ka amata mmadụ, n'onwe ya, ma ọ bụ yana ozi ndị ọzọ.
Anyị raara onwe anyị nye iji chebe ozi nkeonwe gị. Anyị agaghị eji ozi nkeonwe maka ebumnuche ndị ọzọ ọzọ edepụtara na Nzuzo Nzuzo a.
Site na iji weebụsaịtị anyị ị kwenyere na Nzuzo Nzuzo ya na usoro ya.
Anyị nwere ike ịnakọta ụdị ozi nkeonwe ndị a:
Nkeonwe ị nyere
Ndị anamachọ ihe nyere anyị ozi a ka anyị were tinye akwụkwọ maka visa. A ga-enyefe ya ndị ikike dị mkpa ka ha wee nwee ike ịme mkpebi na ma ha ga-akwado ma ọ bụ jụ ngwa ahụ. Ndị ntinye akwụkwọ tinye ozi a na ntanetị.
Ozi nkeonwe a nwere ike ịgụnye ọtụtụ data gụnyere ụfọdụ ụdị ozi nke a na-ewere dị ka ndị nwere nnukwu mmetụta. Typesdị ozi ndị a gụnyere: aha gị, ụbọchị ọmụmụ, ụbọchị njem, ọdụ ụgbọ mmiri, adreesị, njem njem, nkọwa paspọtụ, okike, agbụrụ, okpukperechi, ahụike, ozi mkpụrụ ndụ ihe nketa na mpụ.
A choro ka ị rịọ maka akwụkwọ iji hazie ngwa visa. Dị akwụkwọ ndị anyị nwere ike ịrịọ gụnyere: akwụkwọ ikike ngafe, NJ, kaadị ndị bi na ya, asambodo ọmụmụ, akwụkwọ ịkpọ òkù, akwụkwọ ndekọ ego na akwụkwọ ikike nne na nna.
Anyị na-eji usoro nyocha ntanetị nke nwere ike ịnakọta ozi gbasara ngwaọrụ gị, ihe nchọgharị gị, ebe onye ọrụ na-eleta weebụsaịtị anyị. Ozi ngwaọrụ a gụnyere adreesị IP onye ọrụ, ọnọdụ obodo, yana ihe nchọgharị na sistemụ arụmọrụ.
Otu anyị si eji ozi nkeonwe gị
Anyị na-eji ozi nkeonwe anyị na-anakọta maka naanị ngwa Visa. Enwere ike iji ozi ndị ọrụ n'ụzọ ndị a:
Iji hazie akwụkwọ visa gị
Anyị na-eji data nkeonwe ị banyere na mpempe akwụkwọ iji hazie akwụkwọ visa gị. A na-ekenye ndị ozi dị mkpa ozi a ka enyere ha iji kwado ma ọ bụ gọnwee akwụkwọ anamachọihe gị.
Iji kwurịta okwu na ndị na-achọ akwụkwọ
Anyị na-eji ozi ị nyere iji kwurịta okwu. Anyị na-eji nke a iji zaa ajụjụ gị, mee arịrịọ gị, zaghachi ozi ịntanetị, na izipu ọkwa gbasara usoro nke ngwa.
Iji melite weebụsaịtị a
Iji meziwanye ahụmịhe zuru oke maka ndị ọrụ weebụ anyị, anyị na-eji mmemme dị iche iche nyochaa ozi anyị nakọtara. Anyị na-eji data iji melite weebụsaịtị anyị yana ọrụ anyị.
Iji rube iwu
Anyị nwere ike ịkekọrịta ozi nkeonwe nke ndị ọrụ iji soro iwu na ụkpụrụ dị iche iche. Nke a nwere ike ịbụ n’oge ikpe, nyocha, ma ọ bụ nyocha.
Enwere ike iji data gị iji melite usoro nchekwa, iji nyere aka gbochie ọrụ aghụghọ, ma ọ bụ iji nyochaa nnabata na Usoro na Ọnọdụ anyị na iwu kuki.
Otu esi ekerịta ozi nkeonwe gị
Anyị anaghị ekekọrịta data nkeonwe gị na ndị ọzọ ma ewezuga ọnọdụ ndị a:
Ya na ndị ọchịchị
Anyị na-ekekọrịta ozi na akwụkwọ ị nyere gọọmentị iji hazie akwụkwọ visa gị. Gọọmentị chọrọ data a iji kwado ma ọ bụ jụ ngwa gị.
Maka ebumnuche iwu
Mgbe iwu ma ọ bụ ụkpụrụ chọrọ ka anyị mee nke a, anyị nwere ike ikpughere ndị ọrụ dị mkpa ozi nkeonwe. Nke a nwere ike ịgụnye ọnọdụ mgbe anyị kwesịrị ịgbaso iwu na ụkpụrụ ndị dị na mpụga nke mba onye ọrụ obibi.
Ọ nwere ike ịdị mkpa ka anyị gosipụta ozi nkeonwe iji zaghachi arịrịọ ndị ọchịchị na ndị isi obodo, iji soro usoro iwu, iji mezuo Usoro na Ọnọdụ ma ọ bụ amụma anyị, iji kpuchido ọrụ anyị, ichebe ikike anyị, nye anyị ohere ịchụso usoro iwu, ma ọ bụ igbochi mmebi obodo anyị nwere ike ibute.
Ijikwa na ihichapụ ozi nkeonwe gị
I nwere ikike ịrịọ nhichapụ ozi nkeonwe gị. Nwekwara ike ịrịọ ka o nye gị kọmputa nke ozi niile anyị natara gbasara gị.
Biko mara na anyị enweghị ike irube isi na arịrịọ nke na-ekpughe ozi gbasara ndị ọzọ ma anyị enweghị ike ihichapụ ozi nke iwu chọrọ ka anyị debe.
Anyị na-eji izo ya ezo nke ọma iji gbochie ọnwụ, izu ohi, ojiji, na mgbanwe nke data onwe onye. A na-echekwa ozi nkeonwe na datacenters echekwara nke na-echebe site okwuntughe na firewalls, yana nchekwa nchekwa anụ ahụ.
A na-edebe ozi nkeonwe maka afọ atọ, mgbe afọ atọ gasịrị, a na-ehichapụ ya na-akpaghị aka. Policieskpụrụ na usoro njigide data na-eme ka anyị jide n'aka na anyị soro iwu na ụkpụrụ.
Onye ọrụ ọ bụla kwetara na ọ bụghị ọrụ nke weebụsaịtị anyị ịkwado nchebe nke ozi mgbe ha zigara ya na ịntanetị.
Mgbanwe nke Nzuzo Nzuzo a
Anyị nwere ikike ịme mgbanwe na amụma nzuzo a na-enweghị ọkwa amara. Mgbanwe ọ bụla na Iwu Nzuzo a ga-amalite site na oge ebipụtara ha.
Ọ bụ ọrụ onye ọrụ ọ bụla iji hụ na a gwara ya usoro nke Iwu Nzuzo n'oge ịzụta ọrụ ma ọ bụ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ n'aka anyị.
Anyị nwere ike ịmegharị
Nwere ike ịkpọtụrụ anyị site na weebụsaịtị a maka nsogbu ọ bụla.
Ọ bụghị ndụmọdụ mbata na ọpụpụ
Anyị anaghị azụ ahịa ịnye ndụmọdụ mbata na ọpụpụ mana anyị na-emechitere gị aha.
EGO .B .R.